प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दै मध्यरात ओलीकोमा बाबुराम पुगेपछि.. « risingsunkhabar
प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्दै मध्यरात ओलीकोमा बाबुराम पुगेपछि..
प्रकाशित मिति : २ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:२५
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीका घनघोर विरोधी डा. बाबुराम भट्टराई मध्यराति सुटुक्क ओलीलाई भेट्न पुगेको खुलासा भएको छ । ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो’ भन्दै विन्तीपत्र हालेको शैलीमा ओलीसँग भेट्न गएको खुलासा भएपछि बाबुरामको भण्डाफोर भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद् बाबुराम भट्टराई जसरी पनि केपी शर्मा ओलीको सरकार विस्थापित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले खुलेआम यो घोषणा गर्नुभएको पनि थियो । प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुहुँदा डा. बाबुरामले विपक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।
बाबुरामले मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र कानेखुसीमा आवाज उठाउनुभएको थियो । उता पार्टीभित्रको उहाँको गुट भने कांग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा लागेको थियो । बाबुराम पनि देउवालाई नै बनाउने भन्दै हिँड्नुभएको थियो ।
बाबुरामले यहाँ डबल रोल गर्नुभयो । कानेखुसीमा मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने, सार्वजनिक रुपमा चाहिँ देउवालाई बनाउनुपर्छ भन्ने । खासमा बाबुराम के चाहनुहुन्थ्यो भन्ने प्रष्ट नहुने अवस्था भित्रभित्रै बनिसकेको थियो ।
खासमा बाबुराम के चाहनुहुन्थ्यो ? यसको खुलासा भएको छ । अरु सबैलाई थाङनामा सुताएर बाबुराम आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्थ्यो । यसका लागि उहाँले भरमग्दुर प्रयास गर्नुभएको थियो ।
कानेखुसीमा मधेसीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने, औपचारिक प्रक्रियामा देउवालाई साथ दिने अनि भित्रभित्र चाहिँ आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चक्कर चलाउने । बाबुरामले यसरी ट्रिपल रोल गर्नुभयो ।
बाबुरामको डबल–ट्रिपल रोलवाला हर्कत एमालेका सांसद् महेश बस्नेतले छाताछुल्ला पारेर खोलिदिनुभएको हो ।
प्राइम टिभीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै महेशले बाबुराम आफैं प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जानुभएको थियो । त्यो पनि एकपटक होइन, दुई पटक । सार्वजनिक रुपमा ओलीलाई अत्यन्तै असभ्य भाषामा गाली गर्नुहुने, निकृष्ट टिप्पणी गर्ने बाबुरामले ओलीलाई चाहिँ लुकेर भेट्न जानुभएको रहेछ । महेशका अनुसार मध्यराति एक बजे ओलीलाई भेट्न बाबुराम जानुभएको थियो ।
महेशले यो पोल खोलिदिनुभएपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्र खैलाबैला मच्चियो । जानकार स्रोतहरुका अनुसार उहाँका गुटका केही सांसद्ले ओलीलाई भेट्न जानुभएको थियो कि थिएन भनी सोध्न थाले । बाबुरामले भेटेको होइन भन्नुभयो ।
ओलीलाई भेट्न मध्यराति जानुको कारण आफ्नै पार्टीका सांसद्हरुले थाहा नपाउन् भन्ने बाबुरामको उद्देश्य देखिन्छ । आफ्नै साथीहरुलाई धोका दिने नियत साथ ओलीलाई बाबुरामले भेट्नुभएको पनि प्रष्टिन्छ ।
महेशका अनुसार ओलीलाई भेटेर बाबुरामले ‘म प्रधानमन्त्री बन्छु, सघाउनुपर्यो’ भन्नुभएको थियो ।
ओलीसँगको भेटमा केके कुरा भयो ? यसबारेमा थप जानकारी लिन सनराइज खबरले प्रधानमन्त्री निकट एक नेतासँग सम्पर्क गर्यो । ती नेताका अनुसार बाबुरामले ‘तपाईं कुनै हालतमा प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सक्नुहुन्न । बरु मलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनाव गराउनुपर्यो, तपाईंले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्छु’ भन्नुभएको थियो ।
बाहिरबाहिर उग्र विरोध गर्ने तर मध्यराति गएर सुटुक्क ओलीलाई भेटेको प्रसंगले अप्ठेरोमा परेपछि बाबुरामले उहाँका निकटका विश्वदीप पाण्डेलाई फेसबुक र ट्वीटरमा लेख्न लगाउनुभएको छ । विश्वदीपले ओलीलाई भेट्न बाबुराम जानुभएको स्वीकार गर्दै लेख्नुभएको छ । विश्वदीपको लेखाई यस्तो छ– ‘बाबुरामले ओलीलाई भेट्नुभएको सत्य हो । तर देश द्धन्दमा जान लाग्यो भनेर चिन्ताका साथ एक नागरिकको हिसाबले ओलीलाई होइन देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हो । बाबुरामले– निषेधको राजनीति अन्त्य गरौं, राष्ट्रिय सहमति बनाएर चुनावमा जाउँ, यसले सबैमा विश्वासको वातावरण बनाउँछ । तपाई प्रधानमन्त्री भएकाले तपाईंले नै पहल गर्दा राम्रो हुन्छ– भनेर असल नियतका साथ अन्तिम प्रयास स्वरुप प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।’
मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्यो भन्दै बाबुरामले राखेको प्रस्ताव सुनेर ओली खित्का छाडेर हास्नुभएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ– प्रधानमन्त्री बन्न तपाईंसँग कतिजना सांसद् छन् भनेर ओलीले प्रश्न गर्दा बाबुरामले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रिय सरकार बनाउने भन्नुभएको थियो ।
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नबनाइदिने बुझेपछि फर्किएर आएर बाबुरामले बाबुरामले पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ भनेर ट्वीटरमा लेख्नुभयो । र, त्यस्तो सरकारमा आफ्नो भूमिकाको पनि व्यवस्था हुने गरी प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँको लेखाई यस्तो छ– ‘वर्तमान र पूर्व प्रम बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं ।’ उहाँले दलका प्रमुख र पूर्व प्रम रहेको निर्देशक समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ ।
अर्थात्, प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि बाबुरामले निर्देशक समिति बनाएर भए पनि पूर्व प्रमको हैसियतमा भूमिका खोज्नुभएको प्रष्ट देखिन्छ ।